आईडलकी सज्जा र भ्वाइसका बलबहादुरको के यस्तो माया बस्यो ? « Mazzako Online
आईडलकी सज्जा र भ्वाइसका बलबहादुरको के यस्तो माया बस्यो ?
गायिका सज्जा चौलागाँई र बलबहादुर राजवंशीलाई त बिर्सनु भएको छैन नै होला । ‘नेपाल आईडल सिजन ३’ कि बिजेता सज्जा चौलागाई र ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’बाट चिनिएका बलबहादुर राजवंशीको नयाँ गीत ‘के यस्तो माया बस्यो नि’ सार्वजनिक भएको छ । संगीतकार हरि लम्सालको शब्द संगीतमा रहेको यो गीत हालसालै रिलिज गरिएको हो तर रिलिज गरिएको छोटो समयमै निकै रुचाईएको छ । गीतलाई लिएर दर्शकले निकै राम्रा राम्रा प्रतिक्रियाहरु दिएका छन् ।
यो गीतको भिडियोमा अहिलेका चर्चित कलाकार नाजिर हुसेन र नायिका सुरबीना कार्कीले अभिनय गरेका छन् । गाँउले परिवेश, अनि त्यो परिवेश बीचको निश्चल प्रेमलाई गीति भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको छ । गीत सुन्द जति रमाईलो लाग्छ, भिडियोले पनि आँखालाई शितलता दिन्छ । ‘स्लो पेस’मा बढ्दै गएको प्रेम अनि त्यसको अभिब्यक्तिलाई नाजिर र सुरबीनाले मिठो ढंगबाट प्रस्तुत गरेका छन् ।
भिडियोलाई निकेश खड्काले निर्देशन गरेका हुन् भने भिडियोमा बुद्ध थापाको सिनेम्यट्रोग्राफी रहेको छ । यो भिडियोको सम्पादन बिकास धमलाले गरेका हुन् । यो भिडियो तपाई दर्शकले हेर्नुभएको छ भने तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोला । हेर्नु भएको छैन भने युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ ।
अबुन को’प्रेम प्याला’ मा बिकास र पुजा (भिडीयो)
भुवन र शिशिर र ताराको अभिनयमा ‘पल पल’ (भिडियो)
‘फ्याट्टै’ मा सरोज, आश्मा,राहुल र जिबेश (भिडियो)
प्रियंकाको ट्रोलबारे बर्षाको भनाई यस्तो
माइतीघर २ बनाउँदै भूवन, अनमोल मुख्य भूमिकामा
माधव वाग्लेले बनाउँदैछन् ‘बिवेक’, ‘हिमानी’ रोकियो